Macluumaadka Bukaanka - Adeegga Caafimaadka Bulshada Inc.
Dhammaan ballamaha waxaa lagu sameyn karaa adoo wacaya rugta caafimaadka ee deegaankaaga. Tan waxaa ka mid ah caafimaadka, ilkaha, caafimaadka dabeecadda iyo ku xadgudubka mukhaadaraadka ama adigoo soo waca lambarka bilaashka ah oo weydiista in laguu wareejiyo rugtaada caafimaad ee aad dooratay.
Raadi rugtaada caafimaad
Qof kasta oo bulshada ka mid ah iyo agagaaraha ayaa u-qalma dhammaan adeegyada CHSI. Haddii aad ka shaqeysay ganacsiga beeraha 24kii bilood ee la soo dhaafay waxaad u qalmi kartaa foojarro. Foojarka waxaa loo isticmaali karaa in lagu daboolo qayb ka mid ah adeegyada xaddidan ee ka baxsan xaruntayada, sida ballamaha daryeelka dhalmada ka hor. Haddii aad u-qalanto, foojar sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo daboolidda qiimaha insulin-ta. Bukaanka waxaa laga qaadaa lacag magac u yaal ah haddii ay aqbalaan foojarka.
Maxaa loo keenayaa ballantaada ugu horreysa:
Kaararka (yada) caymiska
Dhalooyinka daawooyinka hadda jira, fiitamiinnada iyo kaabisyada
Codsadeyaasha miisaanka khidmadda sicirka ah - Caddaynta Dakhliga
RX Dib u buuxin
Si toos ah wac farmasigaaga oo weydii dib-u-buuxin, xitaa haddii dhalada laguu qoro ay ku tusayso “dib-u-buuxin ma jirto”. Farmashiyaha ayaa la xiriiri doona bixiyahaaga caafimaad si aad ugu buuxiso waxyaabo dheeraad ah
U oggolow ugu yaraan 72 saacadood oo ah dib-u-buuxinta rijeetada. Wax dib-u-buuxin ah lama heli karo saacadaha shaqada ka dib, dhammaadka usbuuca ama ciidaha.
Waa muhiim inaad ballan la sameysid ugu yaraan 6dii biloodba mar dhaqtarkaaga markaad qaadaneyso daawooyinka xaaladaha daba dheeraada sida dhiig karka ama sonkorowga.
Fadlan xusuusnow Community Health Service Inc. (CHSI) waxay leedahay siyaasad kahortageysa bixiyahaaga inuu qoro maandooriye (jadwalka I-IV).